Sacuudiga iyo Imaaraatiga oo markale cambaareeyey Siyaasada QATAR • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Sacuudiga iyo Imaaraatiga oo markale cambaareeyey Siyaasada QATAR
Sacuudiga iyo Imaaraatiga oo markale cambaareeyey Siyaasada QATAR
June 4, 2019 - By: Horseed Team
Xiisadan cusub ayaa timid kadib markii dowlada Qatar ay sheegtay inaysan taageersaneyn qodobadii kasoo baxay shirkii Makkah Al Mukkarama oo lagu cambaareeyey dowlada Iran.
Wasiirka Arrimaha Dibada ee Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani ayaa wareysi uu bixiyey ku sheegay in Qatar aysan taageersaneyn qodobada lagu xusay qoraalka shirka laga soo saaray oo lagu cambaareenayo Iran isagoo sheegay inay taasi aysan ku jirin danta Gobalka.
“…Waxaa ka muuqda qodobadaasi in lagu taageerayo siyaasada Maraykanka ee ku aadan Iran…” ayuu yiri Wasiirka Qatar oo sheegay inaysan dhankooda taageersaneyn weerarka siyaasadeed ee lagu hayo Iran.
Dhinaca kale Wasiirka Qatar ayaa su’aalo iska weydiiyey qodobada iyo bayaanka kasoo baxay shirarkii todobaadkan ka dhacay Makkah ee lagu sheegay muhiimada mideynta dalalka Islaamka iyo Carabta xili ay xulafada Sacuudiga weli xayiraad ku hayaan dalka Qatar.
Shirarkii ka dhacay dalka Sacuudiga ayaa waxaa ka qeyb galay markii ugu horeysay in muddo wafdi ka socda dowlada Qatar oo uu hogaaminayey Raysalwasaaraha dalkaasi.
Wasiirul Dowlaha Sacuudiga ee arrimaha Dibada Adel al-Jubeir ayaa isniintii shalay qoraal uu ku shaaciyey bartiisa Twitterka si kulul ugu weeraray hadalada kasoo baxay wasiirka arrimaha dibada ee Qatar, isagoo sheegay in dhamaan dalalkii ka qeyb galay shirka ay arragtidooda ay kusoo bandhigeen xiligii uu shirka socday balse ay khalad tahay in shirka ka dib ay Qatar hadal ka dabo-keento qodobada ku qoran bayaanka shirkaasi laga soo saaray.
Sidoo kale Wasiirul Dowlaha Arrimaha dibada ee Imaaraatiga Anwar Gargash ayaa isaguna sheegay in dowlada Qatar ay tahay mid jilicsan oo aan go’aan qaadan karin, waa siduu hadalka u dhigayee.